Galmudug Iyo Ahlusunna oo heshiis ku gaaray magaalada Muqdisho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Galmudug Iyo Ahlusunna oo heshiis ku gaaray magaalada Muqdisho[Sawirro]
MUQDISHO – Waxaa magaalada Muqdisho heshiis ay midoobayeen ku wada saxiixay maamulka Galmudug iyo Ahlusunna Waljameeca oo ka taliya qayb kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka.
Madaxda Galmudug iyo Ahlusunna Waljameeca ayaa ku heshiiyay 14 qodob ayaa ku boggaadiyay dowladda Federaalka Soomaaliya dadaalkii dheeraa ee ay ku bixisay xallinta khilaafka u dhaxeeyay iyagoona muujiyay sida ay uga go’an tahay ka mira dhalinta dadaalkaas.
“Heshiskan aad iyo aad ayaan u soo dhawaynayaa, waana ku mahadsantahay dowladdu. Maanta kahor garoowshiyo ma helin, waxaanse leeyahay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Beesha Caalamka waa in midnimada maanta ay garoowsho ku siiyaan Galmudug.“ ayuu yiri Madaxweynihii Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xassan.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in uu u tanaasulay midnimada gobollada Galmudug iyo in laga gudbo khilaafka soo jireenka ah ee rakaadiyay horumarka Galmudug.
“ Waa mahad Alle hadii arrin todobada sano soo soctay ay maanta soo gunnaanadantay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, dadka reer Galmudug, umadda Soomaaliyeed iyo inta wanaagga jecelna waxaan rajaynayaa in ay aad ugu farxaan.“ ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyay maamulka iyo shacabka Galmudug heshiiskan taariikhiga ah,wuxuuna ugu baaqay Madaxweynaha Galmudug Xaaf iyo Sheekh Shaakir in ay u hoggaansamaan qodobada heshiiskan si buuxdana uga wada shaqeeyaan hirgelintiisa.
Madaxweynaha ayaa xusay in dadaallada dib-u-heshiisiinta iyo mideynta gobollada Gal-mudug ay Dowladda Federaalka Soomaaliya bilowday dhammaadkii bishii 2aad ee sanadkan tan iyo wakhtigaasna ay ku howlanayd sidii ay u mideyn lahayd labada dhinac.
Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri: “Waxaan Alle uga baryeynaa in heshiiskan uu dhaqan galo, qof kastana uu u arko wax wanaagsan oo mira dhal ah, reer Galmudug waxaa laga rabaa in ay hir-geliyaan qodobada dib u heshiisiintan oo danta guud ay wax walba ka hormariyaan, sida madaxdoodu ay u muujiyeen taanuslka iyo xilkasnimada.”
Munaasabadda saxiixa heshiiskan waxaa goob joog ku ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hir-shabeelle, Guddoomiyaha Gobolka Benaadir, Wakiillada Qaramada Midoobey, Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD ee Soomaaliya.